Golden Laser NYANZVI Technical RUBATSIRO
Kuti nechokwadi akangwarira uye kukwana basa, isu kwete chete kuva akakwana pre-sale, Sales, uye pashure-okutengesa basa mugadziriro, tinewo nzwisisika utariri pazvinhu zvinotevera:
1. Mumwe nemumwe mushure mekutengesa-yevashandi vegoridhe laser ane koreji dhigirii kana pamusoro, uye yega yega-yekushambadzira vashandi vekuita basa iri vakagara kwenguva refu kudzidziswa kwemukati uye vakapfuura tekinoroji yedu yekuongorora tekinoroji vasati vapihwa basa.
Yetatu, Standard service management manejimendi
1. Iyo kambani yakaisa iyo yakabatana kodhi yemafambiro uye maitiro ekuongorora kuti ave nechokwadi chekuti basa rekuita rakarongeka uye maitiro ebasa uye masevhisi akarongeka zvine hunyanzvi. Hunhu hwemasevhisi anokonzerwa nekusiyana kwemunhu hunodzikiswa uye kudziviswa.
Chechina, Smooth information chiteshi manejimendi
1. Vatengi vanogona kutaurirana nesu kuburikidza neakasiyana nzira akadai sefoni, fakisi, tsamba, E-mail, uye webhusaiti meseji.
Kuti ashumire nani vose vanoshandisa, uye regai vanoshandisa vanopedzisira Laser michina zvigadzirwa vakachengeteka uye kunetseka-vakasununguka, yendarama Laser ichapa vanoshandisa zvakanaka pashure-okutengesa basa.
Vanoda Mushure-webasa Izvozvi!
Ndokumbira upe iyo Machine Series Nha. Kana iwe uchititumira email kune Mushure mebasa!